Saturday October 03, 2020 - 06:29:48 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Hoggaamiyaasha maamul goboleedyada ayaa ku cadaadiyay Max'med Cabdullaahi Farmaajo in uu ogolaado in doorashooyinka Dowladda Federaalka ay ku dhacaan waqtigii loo asteeyay.
Warsaxaafadeed wadajir ah oo dhinacyadu ay kasoo saareen shir ay ku yeesheen Muqdisho ayaa lagu sheegay in doorashooyinka baarlamaanka ay dhici doonto dabayaaqada sanaddan 2020 islamarkaana horraanta sanadda soo socoto ladooran doono madaxweyne.
Jadwalka doorashada ee lasoo saaray waxaa ku cad in guddiyada doorashooyinka lamagacaabayo bisha Octobar gudaheeda halka dabayaaqada bisha Novembar lasoo xulayo ergada xildhibaanada soo dooran lahaa.
Bisha Decembar dhaxdeeda ayaa lasoo dooranayaa dhammaan xildhibaannada baarlamaanka ee labada aqal, doorashada Madaxweynaha ayaa loo asteeyay 8 bisha Febaraaro 2021 oo ku beegan maalinta uu ku egyahay xilka Farmaajo.
Dadka odorosa arrimaha siyaasadda ayaa aamisan in madaxda maamul goboleedyada ay cadaadis saareen nidaamka Farmaajo waxaana gadaal ka taagnaa waxa loogu yeero beesha caalamka oo si aad ah ugasoo horjeeda muddo kororsi.